Ciidamada Mareykanka ee Africom ayaa sheegay in ay isticmaalayaan wadiiqooyin loo ogolaadey si ay uga hortagaan argagaxisada, islamarkaasna ay u bad baadiyaan danaha Mareykanka iyo dadkoodaba.
Iyadoo lala kaashanayo beesha caalamka, Mareykanka waxa ka go'an inay taageero u fidiyaan Soomaaliya, AMISOM iyo ciidamada nabad-galyada qaranka Soomaaliyeed, si loola dagaallamo kooxaha mitidiinta xag-jiriinta ah.
Dhinaca kalena, dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ciidamada amnigu ay qabteen laba xubnood oo ka tirsan ururka Al-Shabab hawlgal ay ciidamadu ka sameeyeen degmada Awdheegle. Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan noo soo diray.
Weerar ka dhacay Shabellaha Hoose